मा’तेका वडाअध्यक्षले एक महिलामाथि चु’म्बनकाे प्रयास गरेपछि !
मा’तको सुरमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्वर ९ का वडा अध्यक्षले एक महिलामाथि अँगालाे हाल्दै चु’म्बन खाने प्रयास गरेका छन् । वडाध्यक्ष राम नाथले ब्रह्मदेवमा पसल गर्दै आएकी एक महिलालाई चु’म्बन खाने प्रयास गर्दै दु’र्व्यवहार गरेका छन् ।
बिहीबार दिउँसोदेखि पी’डित महिलाकै पसलमा म’दिरा से’वन गरिरहेका वडाध्यक्षले अबेर उनीमाथि चु’म्बनकाे प्रयास गरेको आ’रोप लागेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले वडाध्यक्ष नाथलाई प’क्राउ गरेको जनाएको छ ।
महिलामाथि वडाध्यक्षजस्तो जिम्मेवार मानवले नै यस्ताे घ’टिया व्यवहार गरेको भन्दै आ’क्राेशित स्थानीयले इ.प्र.का. माथि राति नै ढुंगा-मुढा समेत प्र’हार गरेका छन् । म’दिरा से’वनपछि वडाध्यक्षले अँगालो हाल्दै ‘चु’म्बन’ मागेको आ’रोप छ ।
वडा अध्यक्ष नाथले चु’म्बनकाे प्रयास गरेपछि महिलाले उनीमाथि उ’जुरी गरेकी थिइन् । अहिले पनि वडाअध्यक्ष नाथकाे गलत नियत बि’रुद्ध स्थानीय वि’राेधमा उत्रिएका छन् ।